Thursday September 12, 2019 - 09:45:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wasiirka arrimaha diinta ugu magacaaban xukuumadda dabadhilifka Suudaan ninka lagu magacaabo Nasrudiin ayaa shaaciyay in ay dib usoo celin doonaan dadka Yahuudda, isagoo waraysi siinayay Telefeshinka Al Carabiya ee dowladda Sacuudiga ay maalgeliso ayuu tallaabadan ku sheegay mid qeyb ka ah hanaanka calmaaniyadda ee wadanka looga dhawaaqay.
Wasiirkan ayaa ballan qaaday in ay dib udhisi doonaan Kaniisadaha Yahuudda iyo Kirishtaamla islamarkaana ay gacan ka geysan doonaan sidii loo heli lahaa goobo ay ku cibaadaystaan dadka kala diimaha ah sida uu hadalka u dhigay.
"Dowladda Madaniga ah ee Suudaan waxay ka shaqeyn doontaa tasaamuxa diimeed ee muwaadiniinta Suudaan, baaqa aan ujeedinay in Yahuuddu dib ugusoo laabato wadanka wuxuu qeyb ka yahay furfurnaanta diimeed ee aan qaadayno" ayuu yiri wasiirkan katirsan Xukuumadda Al Khurduum.
Dhinaca kale Cabdalla Xamduuk oo ah R/wasaaraha KMG ah ee xukuumadda Suudaan ayaa xaqiijiyay in dowladdiisu ay ugacan haatisay dadka Yahuudda ee horay u deganaa wadanka, isagoo wareysi siinayay telefeshinka Al Jaziira ayuu carabaabay in dib usoo laabashada Yahuudda ee Suudaan qeyb ka tahay xaqqa uu leeyahay muwaadin walba oo Suudaani ah sida uu ku hadaaqay ninkan calmaaniga ah.
Tallaabadan ay qaadday xukuumadda Suudaan ayaa larumeysanyahay in ay tahay mid ay raalli ahaanshiyo uga raadsanayso dowladda Mareykanka oo xukuumaddii Al Bashiir kusoo rogtay xayiraado dhanka dhaqaalaha ah.
Caddeymahan kasoo yeeray xukuumadda cusub ayaa ka caraysiisay muslimiinta wadanka Suudaan oo caan ku ah naceybka ay uqabaan dadka Yahuudda.